ဖေ့ဘွတ်စ်မှာ လူကြည့်အရမ်းများနေတဲ့ “ရည်စား နဲ့ပြတ်တာ ဘယ်လို ခံစားရလဲ ? ဆိုတဲ့ နေဆန်း ရဲ့ အခွီဗီဒီယိုဖိုင် – Zartiman
ဖေ့ဘွတ်စ်မှာ လူကြည့်အရမ်းများနေတဲ့ “ရည်စား နဲ့ပြတ်တာ ဘယ်လို ခံစားရလဲ ? ဆိုတဲ့ နေဆန်း ရဲ့ အခွီဗီဒီယိုဖိုင်
Zar Ti Man | August 27, 2020 | Celebrity | No Comments
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောဆိုနေ ထိုင်တတ်တဲ့ နေဆန်းတစ်ယောက် ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့ ဘဝမှန်ကိုမဖုံးကွယ်ဘဲ ပရိသတ်တွေကို အမှန် အတိုင်းဖွင့်ဟလာခဲ့ပါတယ် ။ သင် ရည်စားနဲ့ ပြတ်တာ ဘယ်မှ မခံစားနဲ့ ဆိုတဲ့ နေဆန်းရဲ့ ဟာသဗီဒီယို လေးကို တင်ပေး လိုက်တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
အားပေးကျတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း နေဆန်း ရဲ့ အခွီဗီဒီယိုလေးကို ကြိုက်နှစ်သက်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်မွန်တိုင်းရင်းသားလေး နေဆန်း ကတော့ ဖေ့ဘုတ်စ် စာမျက်နှာတွေ ထက်မှာ ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေတင်ရင်း လူသိများလာခဲ့တဲ့ဖေ့ဘုတ်စ် ဆယ်လီတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ အားပေးဝန်းရံနေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အများကြီးရလာပြီး အလုပ်တွေ လည်း အများကြီးလာအပ်ကြတဲ့အတွက် ပိုပြီး အောင်မြင်လာတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ။
Photo and video- Nay San
ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲ ပွောဆိုနေ ထိုငျတတျတဲ့ နဆေနျးတဈယောကျ ကတော့ ဒီနမှေ့ာ သူ့ရဲ့ ဘဝမှနျကိုမဖုံးကှယျဘဲ ပရိသတျတှကေို အမှနျ အတိုငျးဖှငျ့ဟလာခဲ့ပါတယျ ။ သငျ ရညျစားနဲ့ ပွတျတာ ဘယျမှ မခံစားနဲ့ ဆိုတဲ့ နဆေနျးရဲ့ ဟာသဗီဒီယို လေးကို တငျပေး လိုကျတာပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။
အားပေးကတြဲ့ ပရိသတျတှလေညျး နဆေနျး ရဲ့ အခှီဗီဒီယိုလေးကို ကွိုကျနှဈသကျမယျလို့ ယုံကွညျပါတယျမှနျတိုငျးရငျးသားလေး နဆေနျး ကတော့ ဖဘေု့တျဈ စာမကျြနှာတှေ ထကျမှာ ဟာသဗီဒီယိုလေးတှတေငျရငျး လူသိမြားလာခဲ့တဲ့ဖဘေု့တျဈ ဆယျလီတဈယောကျပဲ ဖွဈပါ တယျ ။
နောကျပိုငျးမှာတော့ အားပေးဝနျးရံနကွေတဲ့ ပရိသတျတှေ အမြားကွီးရလာပွီး အလုပျတှေ လညျး အမြားကွီးလာအပျကွတဲ့အတှကျ ပိုပွီး အောငျမွငျလာတယျလို့ ဆိုရမှာပါ ။
သဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ ဆက်ဆီကျကျအလှတရားတွေကို ပြသလိုက်တဲ့ နန်းသီရီမောင်
ရေစိုနေတဲ့ ကောက်ကြောင်း အလှအပ တွေ ပုရိသတွေ မြင်စေချင်လို့ ဆိုပြီး ပုံတွေတင်လိုက်တဲ့ “စတယ်လာ”
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် LIVEလွင့်ထားတဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ ဗီဒီယို
မိမိုက်လွန်းတဲ့ ဗီဒီယိုလေး တင်ပေးလိုက်တဲ့ နန်းသီရီမောင်
ပင်ကိုယ်အလှတရားတွေ ပေါ်လွင်နေတဲ့ ၀တ်စုံလေးနဲ့ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၏ ဗီဒီယိုဖိုင်
ပိုစ့်ပေးကြမ်း နေတဲ့ မေပန်းချီ၏ အမိုက်စားရုပ်သံဖိုင်
အမိုက်စားကကွက်ဆန်းတွေနဲ့ အပီအပြင်ဒွန့်ပြလိုက်တဲ့ စူးရှထက်
ဆွံအသွားလောက်အောင် အလန်းစားဖြစ်နေတဲ့ မော်ဒယ်အယ်လာရဲ့ ဗီဒီယို